Calculator mass gaws
Mass Calculator gaws gaaska, xisaab online - u ogolaanaya si loo xisaabiyo mass gaws gaaska by cadaadis mugga, miisaanka, heerkulka iyo gaaska siiyey.
Dooro gaaska ka mid ah liiska ama geli xuduudaheedu
Gaaska xuduudaheedu gaaska
Argon (Ar) Baaruud dioxide (SO2) Biyaha (H2O) Carbon dioxide (CO2) Carbon monoxide (CO) Ethanol (C2H6O) Hawada Helium (He) Hydrogen (H2) Methane (CH4) Nitrogen (N2) Oxygen (O2) Propane (C3H8) Sodium chloride (NaCl) Sodium hydroxide (NaOH)
centimitir saaraayo meter saaraayo inch saaraayo cubic feet
Mass of gaaska:
grams kiilo ounces pounds
Jawiga Pascal milimitir ee Hg mm. of column biyaha inches Hg inches of column biyaha Pound per sq cagta. Pound per sq. Inch
Xisaabi mass ka gaws hawada
Mass gaws waa hanti jirka lagu qeexaa sida mass ee walax siiyey qaybiyey ay lacagta walax, oo sidaas bayna tahay miisaanka ah mid bar walax. mass gaws waxaa lagu qeexay sharciga ku haboon gaaska (Nidaamka isla'egta Mendeleev-Clapeyron):
halkaas oo - Cadaadis gaaska, - Mugga gaws, - Mass of gaaska, - Mass gaws, - Joogta gaaska universal, - Heerkulka buuxda
Molarity formula fiirsashada calculator
Xisaabi-fiirsashada gaws, mass ee xarunta, mugga iyo miisaanka formula ee milan kiimiko ah.